आदमको स्याउ, यो भनिन्छ वा रूपमा, "आदमको स्याउ", यौन फरक मान्छे को reminiscent। पौराणिक कथा अनुसार, संसारमा पहिलो मानिस, स्वर्ग को वर्जित फल स्वाद छ डकगरिएको, र उहाँले आफ्नो घाँटी मा फँस थियो।
त्यसैले यस्तो लेखिएको बाइबिल दृष्टान्त, कि वैज्ञानिक प्रकाशनहरू र भन्न?
आदमको स्याउ - कारण थाइरोइड उपास्थि को कण्ठ आसपास को कोण गठन गरिएको छ जो एक प्रक्षेपण। "आदमको स्याउ" एक वयस्क पुरुष मा छाला अन्तर्गत टक्कर खेल्छ। छ महिलाहरु मा एक आदमको स्याउ? निस्सन्देह, तर यो कम सजिलै देखिने छ।
मानिसहरू मा, उपास्थि दुई टुक्रा को चौराहे विपरीत सेक्स गठन खुला चाप (लगभग 120 °) संग, एक तीव्र कोण (बारेमा 90 °) गठन।
सारा दोष हर्मोन
आदमको स्याउ - एक माध्यमिक यौन वर्ण मानिसजातिको बलियो आधा को प्रतिनिधिको छ। नारी शरीर पुरुष हर्मोन प्रभुत्व हुन्छ, घाँटी मा protrusion थप सजिलै देखिने हुन सक्छ।
जन्म नरम उपास्थि देखि। त्यहाँ हुँदा यौवन अवस्था बालक, तिनीहरूले छाप छन्। यस समयमा, सक्रिय टेस्टोस्टेरोन (पुरुष हर्मोन), ग्रन्थीहरूको र अंगहरु र Tissues को secretion सक्रिय गठन गर्दै आदमको स्याउ उत्पादन गर्न थाल्छ। कहिलेकाहीं यो धेरै मान्छे प्रणाली विकसित गर्दै छन् किन जो छ, भारी छ।
आफ्नो आदमको स्याउ सार्ने swallowing।
आदमको स्याउ आवश्यक किन छ गर्नुभयो? "आदमको स्याउ" सँगै थाइरोइड उपास्थि संग कण्ठ सुरक्षा र therein प्रबन्ध गायन डोरियों। उपास्थि खाने बेला मजबूती खाना रही देखि एयरवेज सुरक्षा, त्यसैले त्यो सफलतापूर्वक गन्तव्यमा सीधा जान्छ। यो घाँटी सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति को एक हो, त्यसैले यसको संरक्षण धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
अर्को सुविधा आवाज यसको टोन सम्बन्धित। जानिन्छ, मानिसहरू यो महिला भन्दा कम छ, र यो थाइरोइड उपास्थि कारण हो। यो घटना व्याख्या गर्न सरल छ: तिनीहरू पुरानो मान्छे बढ्न रूपमा उपास्थि, को घाँटी मा छ जो, यो denser हुन्छ, र गायन डोरियों फैलयो छन्।
प्रायजसो, थायरयड उपास्थि बेचैनी पैदा गर्दैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद, कहिलेकाहीं उहाँले नै महसुस अझै पनि बनाउँछ। दुखेको आदमको स्याउ, कडा, आकार मा वृद्धि गर्दा केही रोगहरु sticks। के रोग यस्तै लक्षण कारण?
यो रोग बिगडा थाइरोइड सञ्चालन संग सम्बन्धित छ। यो शरीर एक हो जो शरीर को सामान्य कामकाज को लागि पर्याप्त, हर्मोन संख्या उत्पादन गर्न थाल्छ। यो रोग को उपस्थिति मा हिउँदमा चिसो गर्न थकान, कब्जियत, घृणाको आउँदैन। लक्षण द्वारा र घाँटी पारित छैन। आदमको स्याउ आकार मा बढ्छ र बाहिर सामान्य भन्दा बढी bulges।
हर्मोन को अतिरिक्त रकम - रोग पनि थाइरोइड ग्रन्थि सम्बन्ध छ, तर यो मामला मा विपरीत साँचो हो। यो रोग, वृद्धि irritability, अत्यधिक डराएको पखाला सँगसँगै छ।
उपास्थि को भंग
यो समस्या गम्भीर परिणाम र उच्चारण लक्षण धेरै छ - सुन्निएको र आदमको स्याउ दुख्छ। लक्षण यसलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ कि कडा महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। साथै, धेरै अन्य अप्रिय भावना हो।
यो रोग उपास्थि सम्बन्धित छन् समस्या को एक बारम्बार कारण छ। यो रोग एक भाइरल संक्रमण कारण सुनिंनु सँगसँगै छ। लक्षण - यो आदमको स्याउ मा भौंक वर्ण, साथै दुखाइ coughing। अक्सर त्यहाँ छ mucosa edema छ dyspnea को कारण।
क्षयरोग र कण्ठ को क्यान्सर
यी रोगहरु थायरयड उपास्थि, swallowing र सास समयमा विशेष गरी उच्चारण जो फ्युजन को साइट मा दुखाइ कारण। ट्यूमर आकार मा बढ्छ गर्दा लक्षण थप तीव्र हुन्छन्। कहाँ hemoptysis, कठिनाई खाने, को आदमको स्याउ तल coma महसुस हुन सक्छ। शरीर को tubercle bacillus हिट हुँदा, यो आवाज मा कोरिएको घाँटी र hoarseness देखिन्छ।
समस्या को सुलझाने लागि परिचालन विधिहरू
केही मानिसहरू परिवर्तन हासिल गर्न खोज्नु आवाज Timbre सर्जरी मार्फत। सामान्यतया, endoscopic सर्जरी सजिलो छ, तर एक सय प्रतिशत हुन सक्दैन नकारात्मक प्रभाव निकाल्न। यो प्रक्रिया दौरान, गायन तार, वा Thinning छोटो र जसबाट इच्छित प्रभाव हासिल छ।
अक्सर मानिसहरू आफ्नै उपस्थिति संग असन्तुष्ट छन् कारण ठूलो आदमको स्याउ गर्न, मनोवैज्ञानिक बेचैनी अनुभव, शल्य चिकित्सा विधिहरू गर्न Resort। सर्जरी थायरयड उपास्थि को undercut को अगाडि सञ्चालन गरिएको छ। यो प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि यो पनि कण्ठ को radiography प्रदर्शन विशेष मा, गायन तार, ले protrusion गर्न दूरी मापन गर्न आवश्यक छ। यसलाई थप परीक्षण को एक श्रृंखला undergo गर्न आवश्यक छ। सर्जरी पछि बाँया खत सामान्यतया सजिलै देखिने र छाला को अन्य क्षेत्रहरु कुनै फरक छैन।
त्यहाँ आदमको स्याउ सम्बन्धित छन् कि केही मजा तथ्य हो:
थायरयड उपास्थि ठाउँमा सिउनी 1. बिट एक निकै कष्टकर र धेरै ताकत अन्त वरिपरि रूपमा खतरनाक छ। तिनीहरूले क्षतिग्रस्त छ भने, मान्छे पनि चेतना समयमा मस्तिष्क को प्रतिक्रिया तुरुन्तै गुमाउन सक्छ। यसबाहेक, प्रभाव समयमा choking निम्त्याउँछ चोट tracheal सक्छ। कारण समस्याका गर्न, आफ्नो आदमको स्याउ - यो सहभागीहरू हात लडाई को लागि एक लोकप्रिय स्थान हो।
2. कहिलेकाहीँ "आदमको स्याउ" पुरुष यौन प्रदर्शन को एक सूचक रूपमा मानिन्छ। केही मानिसहरू धारणा हो कि ओछ्यानमा संभावनाहरु संग जोडिएको केही तरिका मा घाँटी मा protrusion को आकार। तर, यो विचारमा विज्ञान, यो तथ्य साबित छैन रूपमा, चिकित्सा को अनुमोदन गर्दैन।
3. मिति गर्न, यसलाई आवाज को परिवर्तन असर जो आदमको स्याउ, को आकार कम गर्न अपरेसन पूरा गर्न सम्भव छ। यसलाई कुनै पनि विशेष जोखिम प्रस्तुत गर्दैन दावी तापनि यो प्रक्रिया पनि कण्ठ को संरचना को peculiarities द्वारा जटिल छ। त्यसैले त्यो प्रक्षेपण सामान्यतया गर्दैन Transsexual दिन्छ कि घाँटी रहनेछ।
4 अभिव्यक्तिले "Bosom मित्र" धेरै चिनिएको छ। तथापि, केही मानिसहरू यसको अर्थ सोच्न। तथ्यलाई कि वाक्यांश थियो गठन रूपमा "मोहरा को आदमको स्याउ।" यो अर्थमा, यो एउटा पिउने मित्र, छैन रूपमा अब मानिन्छ एक सर्वश्रेष्ठ साथी थिए।
5 "आदमको स्याउ" मात्र होइन मानिसहरूलाई तर पनि अन्य स्तनधारी मा उपस्थित छ। यस मामला मा, थाइरोइड उपास्थि यस्तै समारोह कार्य गर्दछ। उदाहरणका लागि, ब्याटिङ तिनीहरूले एक विशेष ध्वनि फेंकना गर्न सक्षम छन् जो एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो।
6 आदमको स्याउ सार्ने, उहाँले तपाईं उहाँलाई हात राख्नु हो, swallowing गर्दा सार्न र तल, राम्रो भावना कि सक्षम छ। मान्छे यस्तो मौका प्रयोग गरिएको छ, तर सञ्चार जब पशुहरू आवाजको टोन विनियमित, त्यसैले प्रत्येक अन्य बुझ्छु।
यसरी आदमका स्याउ - मानिसहरूलाई लागि मात्र होइन तर पनि जनावर एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो। ती र अरूलाई, यो एक सुरक्षा समारोह छ, तर पनि गम्भीर रोगहरु को संभावना संकेत गर्छ। त्यहाँ थाइरोइड उपास्थि को कोण को गठन को साइट मा दुखाइ, सुनिंनु, बेचैनी छ वा अन्य यस्ता लक्षण बाधा एक समय तरिका मा एक डाक्टर देख्न गर्नुपर्छ भने। उपस्थिति लागि, यो आदमको स्याउ भताभुंग पार्छ भने पनि, यो आवश्यक छैन शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप गर्न रिसोर्ट छ। कुनै पनि सञ्चालन कुनै कुरा यो हुन सक्छ कसरी नम्र एक जोखिम छ। यदि स्वास्थ्य खतरामा छैन, यसलाई ठीक प्रकृति नै बनाएको हो भन्ने कुरा छैन आवश्यक छ।
वजन लागि परम्परागत चिकित्सा
एक teratogen के हो? जन्मजात anomalies को कारण
मुख्य कारण र mastitis को लक्षण
Inhaler आईडीए: मोडेल, निर्देशन र प्रतिक्रिया। nebulizer र
गैस्ट्रिक polyps को उपचार
को थैली र मूत्र प्रणालीको रोगहरु
सैमसंग वेभ 525: निर्दिष्टीकरणहरू, सेटिङ्हरू, समीक्षाहरू। कसरी फ्लैश गर्ने? सैमसंग वेभ 525 त्यसो भएन: कसरी रिफ्ल्यास गर्ने?
लेसोथो: राजधानी, आबादी र आकर्षण
हतारमा kefir को पाक: केहि सरल व्यञ्जनहरु
ट्याब्लेट Acer A500। Acer (ट्याबलेट): विवरण, निर्दिष्टीकरण, समीक्षाहरू
सेन्ट पीटर्सबर्ग। जनावर संग्रहालय। सृष्टिको इतिहास। प्रदर्शन। उद्घाटन घण्टा
हृदयरोग। कोरोनरी धमनी बाइपास कलम बांधने